You maara na ... "Ide ederede nke ọma mara mma"? | Akụkọ akụrụngwa
You maara na ... "Ide ederede nke ọma mara mma"?
Ọdịdị nke ekwentị mkpanaka na mgbasawanye netwọkụ izi ozi ozigbo dịka WhatsApp ma ọ bụ Telegram, yana netwọkụ mmekọrịta dịka Twitter, na njedebe mkpụrụ edemede 140, emeela ka ọtụtụ ndị ọrụ sitere na nka nwee ike igosipụta ihe ha chọrọ, iji dee ihe adịghị mma, na-agafe na Arc de Triomphe iwu ndị bụ isi na nke elementrị nke asụsụ Spanish.
Ihe anyị na egosiputa na blọọgụ, netwọkụ mmekọrịta na ndị ọzọ, dị mkpa dị ka ihe ngwụcha ngwụcha, ọ dị maka onye ọ bụla hụrụ ya, a ga-edekwa ya nke ọma. Maka nke a, Wiko na La Vecina Rubia jikọrọ aka wee bido ngwa nke, n'okpuru aha Ide ede nke oma, Ebumnuche ịkụziri ndị ọrụ ịntanetị na ekwentị mkpanaaka iji dee nke ọma, nke ọma, ịmatakwu ma kuzie ihe, nke ụfọdụ ndị chọrọ n'ezie.
Ide ihe oma bu ihe oma ... ma mara nma, joro njo ma jọrọ njọ, buru ibu ma nwekwa akpukpo aru, acha odo odo na aja aja ...
You chetara mgbasa ozi maka ihe ọ softụ softụ na-ewu ewu? Anyị nwere ike itinye okwu a ebe a, n'ihi na ide ihe nke oma di nkpa, oburu na ogaghi abu ihe nzuzu. Anyị niile na-emehie ihe, na ka ị na-ede ihe, ọ ga-adịrị gị mfe ịme ha. Ma enwere mmejọ, na emehie.
Ide ede nke oma bụ ọhụrụ ngwa «mepụtara na ewute dee nke ọma na gị mobile na nwere oké ntutu» na bilitere site na njikọ nke WiKo, onye na-emepụta teknụzụ, na La Vecina Rubia, profaịlụ njakịrị na Twitter na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ abụọ na-eso ụzọ ya na onye kachasị echegbu onwe ya na ndụ bụ "inwe ntutu na ụbụrụ n'okpuru."
Ngwa dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play maka gam akporo ngwaọrụ, ọ bụ kpamkpam enwerela onwe ya na nke ihe omuma. Ebumnobi, ha rụtụrụ aka na Wiko, bụ «mee ka ndị ọrụ mara mkpa ọ dị iji nsụpe, edemede na ụtọ asụsụ site na ekwentị".
Ọ bụ ya mere ngwa ahụ na-enye "Rubitips" ma ọ bụ ndụmọdụ na ụkpụrụ ọdịnala bụ isi nke asụsụ Cervantes, "Rubiconsultas" nke La Vecina Rubia zigara na RAE, nke onye na-ede blọgụ malitere na RAE n'onwe ya, «Rubiurbanas Akụkọ Ifo» na akuko ugha banyere ojiji asusu anyi, na "Egwuregwu nke Blondes", egwuregwu nke ị ga-enwe ike itinye ihe ọmụma enwetara n'ule ahụ.
Cheta, ịbụ onye mara mma ma ọ bụ maa mma, na-aga ejiji ọhụụ, ma ọ bụ nwee nnukwu ntutu Hilario Pino ga-achọ ịme, adabaghị na ide ya n'ụzọ ziri ezi. Site n'ụzọ, ị ga-enwe ike ịchọpụta mpepepepe okwu m tinyeworo na post a? Lee anya, agbanweela m ya ọbara ọbara?
Ide ede nke oma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » You maara na ... "Ide ederede nke ọma mara mma"?
Ọfọn, lee, José: Na ịkwesịrị iji ọ bụghị naanị ngwa ahụ, kama ọ bụ site na Akwụkwọ ọkọwa okwu nke RAE, yana Pan-Hispanic nke obi abụọ na oge ụfọdụ Spanish-English-Spanish.
Have zigara onwe gị ihe karịrị otu mmejọ na obere akwụkwọ a nke na-eme ihere.
Enwere m ike ọ gaghị abụ onye na-acha odo odo ma ọ bụ mara mma ma ọ bụ tweeted ma ọ bụ onye a ma ama, mana m na-eme onwe m elu na m ka na-arụ ọrụ zuru oke iji kọwaa ihe ndị magburu onwe ya, dịka nke gị, na-akwadoghị na netwọkụ na-enweghị ihere.
PS: Ọ bụ ihe dị ka platinum, ndị na-ese mechi were were ọrụ itinye ụfọdụ ihe na ọnụ ọgụgụ ha (yabụ mmetụta anaghị adịgide ma ọ bụ detụ ọgaranya).
Daalụ maka ihe ọ bụla, huh?!
Zaghachi Benjamin Garabato
Ndewo Benjamin Garabato. Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị. N'adịghị ka gị, enwere m ekele maka ihe na-adịghị m mma, ọbụlagodi mgbe okwu gị na-egosi enweghị nsọpụrụ doro anya. O doro anya na ide ihe nke ọma, nke ị na-eme, abụghị otu omume ọma.
Site n'ụzọ, ngwa a, ọbụlagodi na ọ masịghị gị, ọ bụ maka ndị mmadụ na-ede ihe n'ụzọ ziri ezi na-enweghị ime nsụpe ma ọ bụ ụtọ asụsụ, ọ bụghị maka ịdejupụta ahịrị ndị na-enweghị isi na-edoghị anya ma ọ bụ nye ozi.
Daalụ maka igbu oge ike gwụrụ gị na-akatọ post m. Ahuru m ya n'anya!
PS: na Spanish, a na-etinye mkpuchi na akara ajụjụ ma na mbido ma na ngwụcha ahịrịokwu ahụ. Ma mgbe colon, edere ya na obere ederede, ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ abụọ ebe i mere ya na-ezighi ezi. Ole okwu, ma mgbe ahụ ...
Ahapụrụ m njikọ ahụ ka ngwụcha izu a nwee ike iji ntakịrị oge mụọ iwu abụọ yana yabụ, oge ọzọ, adabala n'ime onye nzuzu: http://www.rae.es/consultas/ortografia-de-los-signos-de-interrogacion-y-exclamacion y http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2a3yRXFBiD6rvDOMtq
Mmakọ ezigbo onye na-agụ!
Uber ga-akwụsị ịrụ ọrụ na London na Septemba 30